နမ့်ပွန်ချောင်း ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်း လေ့လာမှု အစီအစဉ်များအား ရှင်းလင်း - Kanbawza Tai News
Home ဆီဆိုင် ရှမ်းတောင်သတင်းများ နမ့်ပွန်ချောင်း ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်း လေ့လာမှု အစီအစဉ်များအား ရှင်းလင်း
နမ့်ပွန်ချောင်း ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်း လေ့လာမှု အစီအစဉ်များအား ရှင်းလင်း
August 23, 2020 ဆီဆိုင်, ရှမ်းတောင်သတင်းများ,
ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်တွင် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် နမ့်ပွန် ချောင်း ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၏ ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်း ဆိုင်ရာ လေ့လာမှု အစီအစဉ်များအား ဩဂုတ်လ ၁၈ ရက်၊ နံနက်ပိုင်းက မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး အစည်းအ ဝေးခန်းမတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
စီမံကိန်း ရှင်းလင်းပွဲတွင် HTCT Energy Investment Co.,Ltd. (Myanmar) ကုမ္ပဏီမှ Project Director ဦးမျိုးထွဋ်က စီမံကိန်း နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းနှင့် ကုမ္ပဏီ အတွေ့အကြုံများကို လည်းကောင်း၊ HTCT Energy Investment Co.,Ltd. (Myanmar)ကုမ္ပဏီမှ Design Engineer ဦးဝင်းသူအောင်က စီမံ ကိန်းဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းဆိုင်ရာ လေ့ လာ မှုအစီအစဉ်များ၊ နမ့်ပွန်ရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်း ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်း ဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် ဘူမိဗေဒဆိုင် ရာ စူးစမ်း လေ့လာမှုများ၊ မြေမျက် နှာသွင်ပြင် အနေအထား လေ့လာ တိုင်းတာမှုများ၊ ဇလဗေဒဆိုင်ရာရေ စီး၊ ရေလာ အခြေအနေနှင့် စီးဝင်ရေ စီးနှုန်း တိုင်းတာမှုများနှင့် နမ့်ပွန် အ ထက်ပိုင်းရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်း များအတွက် လျာထားသည့် Run Off River Type စီမံကိန်း အမျိုးအ စား နနာမူနာများကို လည်းကောင်း၊ ERM Environmental Resources Management ကုမ္ပဏီမှ Assistant Consultant ဒေါ်စုစုလှိုင်က သဘာ ဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဘဝ ဆိုင်ရာ ထိခိုက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ လေ့လာဆန်းစစ် ခြင်းအကြောင်းအရာများကို လည်း ကောင်း ပရိုဂျက်တာဖြင့် အသီးသီး ရှင်းလင်း တင်ပြပြီး တက်ရောက် လာသော ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ် စားလှယ် ဦးခွန်သန်းထူး၊ ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးခွန် မောင်ပယ်၊ မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှုကော် မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသိန်းဇော်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိ သူများ၊ ပင်စုံ၊ တောင်ရှေ့၊ လွယ်ပွတ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ နှင့် ကျေးရွာတာဝန်ခံများတို့က ပြန် လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အထက် နမ့်ပွန်ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများသည် စီးဝင်ရေစီးနှုန်းကို တိုက်ရိုက် အသုံးပြု စက်လည်ပတ် မောင်းနှင်သည့် Run Off River Type စီမံကိန်း အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း စက် တပ်ဆင် အင်အား ၁၇၀ မဂ္ဂါဝပ် တပ်ဆင်ရန် လျာထား ကြောင်း သိရသည်။